သူအသက္ရွိစဥ္ေလးမွာ ျမင္ေတြ႕သြားခ်င္တဲ့ အိမ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္ေလးရဲ႕ပံုစံကို ပရိတ္သတ္ေတြထံခ်ျပလိုက္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္)…. – Cele Snap
သူအသက္ရွိစဥ္ေလးမွာ ျမင္ေတြ႕သြားခ်င္တဲ့ အိမ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္ေလးရဲ႕ပံုစံကို ပရိတ္သတ္ေတြထံခ်ျပလိုက္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္)….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွားကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပြီး ပရိတ်သတ်ကိုရသမျိုးစုံခံစားရအောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)ဟာဆိုရင် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင် အောင်မြင်စွာနဲ့လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဦးမျိုးမင်းက မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုလည်း သူတတ်သိသမျှသရုပ်ဆောင်ပညာရပ်တွေကို မချွင်းမချန်သင်ကြာပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။
ဒါ့အပြင် ဦးမျိုးမင်းက ပရိတ်သတ်တွေတစ်ခဲနက်ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ နှင်းဆီအငြိမ့်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုလညး်မမှားပါဘူးနော်။ဦးမျိုးမင်းက လူအများနဲ့လိုက်လျောညီထွေနေတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားချင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ဦးမျိုးက သူ့ရဲ့နှင်းဆီအဖွဲ့သားတွေအပေါ်မှာလည်း သားသမီးအရင်းသဖွယ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေတာကိုလည်း မြင်တွေခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်တစ်နေရာစီဝေးကွာနေကြတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး မိသားစုတွေနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆုံဆည်းကြစေဖို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးမျိုးက ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းဦးမျိုးမင်းက”လူတွေအားလုံးရဲ့ အနာဂါတ်အိပ်မက်တွေဟာ ဖျတ်ကနဲ မှိတ်ပစ်လိုက်သလို ရုတ်တရက်အမှောင်ကျသွားခဲ့တယ်။ လူငယ်တွေအတွက်အချိန်အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ပြန်လည်မွေးမြူရတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေရယ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေက ရွှေဆိုင်မှာပေးလိုက်ရတဲ့ အလျော့တွက်တွေလို ဘာမှပြန်မရဘူး။အချိန်နည်းနေတဲ့ လူကြီးတွေအတွက်တော့လက်ကျန်သက်တမ်းကနေ ရက်ပေါင်း ခုနှစ်ရာကျော်ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရပြီ။
နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊နဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာနိမ့်ကျနေတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေကို ကျနော်တို့ နှစ်ဆပြန်ကြိုးစားရမှာကိုသိရှိနားလည်ကြပါတယ် ရင်ဆိုင်ဖို့လဲအသင့်ရှိပါတယ်။ နောင်မျိုးဆက်တွေ ကောင်းစားစေချင်တာကိုး၊ကျနော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျနော်တို့အကုန်ထားခဲ့ရမှာပါ ကျ​နော်တို့မသေခင်မှာ………လူငယ်တွေလိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊တရားမျှတမှု၊လွတ်လပ်မှု၊အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ကင်းမဲ့တဲ့နေရာလောဘဒေါသနဲ့မနာလိုခြင်းတွေကင်းတဲ့နေရာ၊လိမ်ညာလှည့်ဖျားခြင်းမရှိတဲ့နေရာ၊ပြုံးရွှင်နေတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့ အကြင်နာတရား​တွေပြည့်​ဝ သစ္စာတရားတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ မြိုတော် လူအချင်းချင်း ယုံကြည်ရတဲ့နေရာ ၊ယုံကြည်ခြင်းမြို့တော်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့​​​​နေ ရာကို မြင်ရရင် ကျနော်သေပျော်ပါပြီ။အဲဒါကျနော်တိုအိပ်မက်ပါပဲ…။ကျနော်ပြောရဲတယ် တစ်သက်လုံးမပွင့်ဖူးတဲ့ပန်းကလေးတွေတောင် အဲဒီနေရာမှာပွင့်ကြလိမ့်မယ်” ဆိုပြီး သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Source ; Maungmyomin Yintwinphyit’s Facebook Account
မွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီမနားမေနတင္ေပးေနတဲ့ သူမကို စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႕ေျပာဆိုေနတဲ့သူအား ထိထိမိမိတုန္႕ျပန္လိုက္တဲ့ ဟန္နာယူရီ…..
အခုလိုအေျခအေနေၾကာင့္ေရွာင္တိမ္းေနရတဲ့ သူမရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကိုေျပာျပလာတဲ့ ေခးဆက္သြင္…..